Zimbabwean women prostituting themselves for $2? – AfricanVoice Global News gtag('config', 'UA-134208160-2'); Your SEO optimized title
Zimbabwean women prostituting themselves for $2?
JOHANNESBURG – A Zimbabwean writer has started a campaign to assist his female compatriots, whom he says are offering sexual services for as little as less than US$2 in central Johannesburg.
Collen Makumbirofa, who says he has helped assist some stranded Zimbabweans affected by loss of income during the Covid-19 lockdowns in his country’s southern neighbour, said hundreds of women from his home country had joined those who sell their bodies in order to eke a living under South Africa’s shrinking employment market.
Below is his write-up in full, as published on https://beforeitsnews.com/
Tags: #Prostitutes, #Prostitution, #Zimbabwean women
Previous Siemens donates masks to Sudanese government
Next Road closures, traffic delays expected in SA strike